I-Indo-German Chamber of Commerce Yazisa aMalungu eKomiti eNtsha
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » I-Indo-German Chamber of Commerce Yazisa aMalungu eKomiti eNtsha
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel
Igumbi loRhwebo lase-Indo-Jamani
I-Indo-German Chamber of Commerce (IGCC) namhlanje ibhengeze ukuqeshwa kukaPuneet Chhatwal, uMlawuli oPhetheyo kunye neGosa eliyiNtloko, iNkampani yeehotele zaseIndiya (IHCL), njengoMongameli omtsha weChamber. Inkokeli yezoshishino enamava, uPuneet Chhatwal uthatha izintambo kuMongameli ophumayo, uKersi Hilloo (uMlawuli oLawulayo uFuchs Lubricants India).
I-IGCC ikwatyumbe uSekela Mongameli omtsha kunye noNondyebo kwikomiti yakhe.
IJamani lelona liqabane likhulu laseIndiya kwezorhwebo kwi-EU kunye ne-7th kutyalo-mali lwangaphandle olukhulu eIndiya.
I-IGCC lelona Candelo likhulu laseJamani le-Bi-National Chamber (AHK) phesheya, kunye neyona Chamber inkulu yezoRhwebo eIndiya eneenkampani ezingaphezulu kwama-4,500 kumacandelo ngamacandelo.
IGCC ukwabhengeze ukubekwa kwamalungu ekomiti entsha, u-Anupam Chaturvedi (uMlawuli kunye noMmeli oyiNtloko we-DZ BANK India) njengo-Sekela Mongameli, kunye no-Kaushik Shaparia (u-CEO we-Deutsche Bank India) njengo-Treasurer.
Ethetha kulo msitho, uPuneet Chhatwal, MD kunye neCEO, IHCL uthe: “Kulilungelo ukonyulwa njengoMongameli, kwaye sijonge phambili ekuthatheni phambili umsebenzi we-IGCC wokuba ube sisikhuthazi esibonakalayo ekukhuthazeni ubudlelwane kwezoshishino phakathi Indiya naseJamani. Kumaxesha angoku, sikhona isidingo esikhulu sokusebenzisana kwihlabathi liphela, kwaye sizakuqhubeka nokuxhasa iinkampani ezingamalungu ethu ekudaleni amathuba, ukwanda kokuzibandakanya kunye nokuzisa ixabiso. ”
Ethetha ngezi zithuba zintsha, uStefan Halusa, uMlawuli-Jikelele, i-IGCC, uthe: “Samkela amalungu amatsha ekomiti kwi-IGCC kwaye sijonge phambili kwigalelo labo elingathethekiyo. Siyakholelwa ukuba uMnu. Chhatwal, kwindima yakhe njengo Mongameli, uza kuza namava akhe enkcubeko kunye nokuqonda okungafaniyo kwezoshishino eJamani nase India. IJamani lelona qabane likhulu laseIndiya kwezorhwebo kwi-EU kunye ne-7th kubatyali bamanye amazwe abakhulu eIndiya. Oku kuzakusinika ithuba lokuba siphonononge iindawo ezintsha zokukhulisa uqoqosho ngelixa sisebenzisa amandla omabini la mazwe. ”
IPuneet Chhatwal inamava amane eminyaka yamava ehlabathi. Ngoku ukhokela eyona nkampani inkulu kwezona zibalaseleyo eMzantsi Asia, iHCL. Ngaphambi koku, ubambe iindima zobunkokeli eJamani naseYurophu. Ukwangumongameli woMbutho wehotele waseIndiya kunye noSihlalo weKomiti yeSizwe yeCII yezoKhenketho.
IGCC liziko elihlonitshwayo eIndiya naseJamani. Yeyona Ndawo inkulu yaseJamani kwi-Bi-National Chamber (AHK) phesheya, kunye neyona Chamber inkulu yezoRhwebo eIndiya eneenkampani ezingaphezulu kwama-4500 kumacandelo ngamacandelo. Malunga ne-1,800 yeenkampani zaseJamani ziyasebenza eIndiya, zibonelela ngaphezulu kwe-500,000 yemisebenzi kweli lizwe.
Eyasungulwa ngo-1956, i-Indo-German Chamber of Commerce (IGCC), inhlangano engenzi nzuzo kunye neminyaka engama-65 yokuxhobisa ubambiswano namhlanje ikhona kwiindawo ezi-6 kulo lonke elaseIndiya kunye neJamani. Inikezela ngeenkonzo ezininzi ezinje ngokuKhangelwa kweQabane kwiShishini, ukuQulunqwa kweNkampani, ukuQeqeshwa kwezoMthetho, ukuFunwa kwabasebenzi, ukuThengiswa kunye nokuPhawulwa, iiFair Fairs, uLwazi kunye nokuTshintshiselana ngolwazi ngokuPapasha, ukuThumela kunye neMisitho, kunye noQeqesho.